विचार/ब्लग - deshparadesh |सीप, समृद्धि र सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीका लागि
कृषि मन्त्रीलाई खाडीबाट खुल्ला पत्र
सबैभन्दा पहिले त मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनु भएकोमा बधाई दिदै सफल कार्यकालको शुभकामना । यो खुल्ला पत्र तपाईलाई विल्कुलै नयाँ कुरा सिकाउन वा कुनै दिशानिर्देश गर्नका लागि हुँदै होईन । किनकी मैले बाँचेको आयु भन्दा लामो तपाईको राजनीतिक जीवन छ । नेपाली जनजीवन, कृषि र यससँग जोडिएको गरिबीबारे तपाई पुर्ण जानकार हुनुहुन्छ । किसानका हक र गरिवि
कथित ‘आजाद’ भिसामा आउनेहरु थप समस्यामा
करिम बक्स मियाँ, दोहा-
चितवनका मोहन अधिकारी कथित आजाद भिसामा कतार आए । कफी वरिष्तामा अनुभवी उनले काम पनि पाए, तर भिसा परिवर्तन हुन नसक्ने कम्पनीले जानकारी दियो । अजाद भिसामा नै कतार आएका धरानका अशोक राईले पनि सेल्समा काम त पाए कम्पनी परिवर्तनमा समस्या आएपछी उनी पनि निराश छन् ।
राई र अधिकारी दुवै करीव १ लाख ७५ हजारको हाराहारी खर्चेर कतार छिरेका हुन् । यी दुई प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । अरु धेरै
दलालको ताकत र विष्ट बहिर्गमनको सन्देश
कामदारलाई ठगि खान पल्केका दलालहरुको झण्डै दुई वर्ष दोहोलो काढेका गोकर्ण विष्ट अन्ततः दलालकै धरापमा परेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै टीमले बनाएको मापदण्डका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङकनमा दोश्रो नम्वरमा रहेका विष्ट यसरी एकाएक मन्त्रीमण्डलबाट फ्याँकिनु रहस्यमय नै भयो । राम्रो काम गरिरहेको वखत फ्याँकिएका विष्टलाई त यसले राजनीतिक लाभ हुने छ । तर स्वयं रोजगारीका लाग
वैदेशिक रोजगार विभागमा मैले जे भोगें
निमेष गिरी, युएई-
बिगत केही बर्ष देखि बैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा यूएईमा छु । छोटो बिश्राम र केहि व्यक्तिगत कामका लागि गत महिना म नेपाल गएको थिएँ । प्रत्येक दुई वर्षमा श्रम अनुमतिको नविकरण गर्नुपर्दछ भन्ने जानकारी थियो । यूएई फर्कने बेला आफ्नो असजगताका कारण श्रम स्वीकृति सकिएको हुँदा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्कनु पर्यो जसको कारण काटिसकेको टिकट गुमाएर आर्थिक भार परे पनि त्यसको जिम्मे
गैर आवासिय नेपालीको सम्मेलन, अव यसो नहोस्
आजको लेखाईमा केहि समय अघि सम्पन्न गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएनए) को विश्व सम्मेलन तथा अन्तराष्ट्रिय साधारण सभाको अनुभवमा केन्द्रीत गरेको छु । सो सम्मेलनमा सहभागि हुन खाडीबाट हवाई जहाज चडेर उत्रिएँ कान्तिपुर नगरी । सरकारले बनाएको बुटिक विमानस्थलमा लम्कँदा चञ्चल चित्तमा हलचल आयो । विमानको टिकसका लागि पो पैसो तिर्नुपरेको थियो, मनको विमानमा त निःशुल्क नै उड्न पाईन्छ नी हौ गाँठे ।
कतारका नयाँ राजदूतलाई अवसरः कस्तो बन्ने, कसको बन्ने ?
नेपालको तर्फबाट राजदुत नियूक्त भएर कार्यभार सम्हाल्न भर्खरैमात्र कतार आईपुगेका राजदुत डा. नारदनाथ भारद्वाजलाई यसै पत्र मार्फत स्वागत गर्दै कार्यकाल अविश्मरणीय एवं उच्च प्रशंसनिय रहोस भन्ने शुभकामना ब्यक्त गर्न चाहन्छु ।
राजदुत नियुक्त भएर भर्खरै आइपुगे पनि समय सुचना र प्रविधिको छ । त्यसैले तपाई कतार र कतारमा श्रमरत नेपालीबारे त्यतिधेरै अनभिज्ञ हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । राजदुतक
कतारमा दूतावास बलियो की एजेण्ट ?
करिम बक्स मियाँ-
सदा झैं दुतावासका श्रम सहचारी नरेन्द्रराज ज्ञवालीको कक्ष पिडितहरुले भरिभराऊ थियो । अधिकांश वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगिएका पिडितहरु श्रम सहचारीको कार्यकक्षमा देखिन्थे । भुईंतलामा रहेको ज्ञवालीको कक्षमात्र होईन, पहिलो तल्लामा रहेको श्रम कन्सुलर शिवराम पोखरेलको कक्षमा समेत पिडितहरुको घुईंचो देखिन्थ्यो ।
सो भिडमा पोर्चुगल जाने भनेर हिंडेका दुईजना पिडितहरु श्रम सहचारी ज्ञवाली समक्ष आफ्
दशैंमा घर फर्किन पाउने आशामा खाडीमा कार्यरत घरेलु कामदार
राजा बगर, दुवई-
चार बर्ष देखि रोकिएको घरेलु काममा पुनः श्रम स्वीकृति खुल्ने समाचारले विशेषगरी खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत नेपाली खुशी भएका छन् । उनीहरुमा यस वर्षको दशैंमा घर जान पाइने आशा बढेको छ ।
संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधवारको बैठकले निश्चित प्रकृया पुर्याउनेहरुलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसले वैध
कोमाका विरामीः कसको दायित्व ?
कोरिया र जापानको रोजगारी सपनाः लगानी र प्रतिफल तुलना महत्वपूर्ण
मलेशिया जानेलाई तावाबाट उफ्रेर भुङ्ग्रोमा नपुर्याउँ